MAQAAL: Lionel Messi Vs Cristiano Ronaldo-Dagaalka Koobabka Iyo Abaal Marinaha Oo Galay Waqti Muhiim Ah Iyo Waxyaabaha Ay Messi & Ronaldo U Ordayaan. – GOOL24.NET
MAQAAL: Lionel Messi Vs Cristiano Ronaldo-Dagaalka Koobabka Iyo Abaal Marinaha Oo Galay Waqti Muhiim Ah Iyo Waxyaabaha Ay Messi & Ronaldo U Ordayaan.
Saddexda bilood ee soo socda waxaa halkii ugu saraysay markale gaadhi doona dagaalka toban sano jirsaday ee u dhexeeya Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waxaana la galay qaybta ugu muhiimsan ee lagu go’aamin doono abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican oo ay Ronaldo iyo Messi 10 jeer dhexdooda ku soo guulaysteen sanadihii la soo dhaafay.
Laakiin akhristow ogow in xili ciyaareedkan ay xamaasadu ka badan tahay dagaalkii hore ugu dhexeeyay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo maadaama oo ay jirto xog cajiib ah oo labadan xidig ay barbaro ku yihiin isla markaana midkii gacanta sare yeeshaa uu hogaamin doono kaan kale.
Aan soo qaadano waxyaabaha saddexda bilood ee soo socda ay Ronaldo iyo Messi ku tartami doonaan iyo sababta uu khaas ugu yahay xili ciyaareedkani. Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa barbaro ku ah saddexda arimood ee ugu muhiimsan ee xidiga aduunka ugu fiicani ku faano kuwaas oo ah in mid kastaaba haysto 4 koob oo Champions League ah, 5 abaal marinta Ballons d’Or ah iyo waliba min 4 kabood oo dahab ah ee gool dhalinta Yurub.
Sidaa daraadeed, dagaalka aan dhamaadka lahayn ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waxa uu marayaa heerkii ugu xumaasada badnaa iyada oo midkii ku guulaysta Champions league, Ballons d’Or ama kabta dahabka ah ee Yurub uu kan kale ka sare mari doono, waana sabab saddexda bilood ee inagu soo aadani u yihiin kuwo wax go’aamin doona.
Waxa kale oo muhiim ah in la xusuusto in sanadkani yahay sanad koobka aduunka la ciyaari doono kaas oo ay qayb ka yihiin Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, waxayna tani la micno tahay in wax qabadkooda heerka kooxeed ay sii xoojin karto wax qabadka ay ka sameeyaan koobka aduunka.
Cristiano Ronaldo ayaa hal sabab kaga faa’iido fiican Lionel Messi taas oo ah in qaybta labaad ee xili ciyaareedka uu la soo baxo qaab ciyaareed cajiib ah sida uu ku soo jiray bishii ugu danbaysay oo uu goolal badan soo dhaliyay laakiin Lionel Messi ayaa isna Ronaldo kaga faa’iido badan in haddaba uu kooxdiisa keenay finalka Copa Del Rey isla markaana uu koobka La Liga u gacan galinayo Balaugrana.
Si loo Cristiano Ronaldo loogu doorto xidiga aduunka ugu fiican waxa uu ku qasban yahay in uu Real Madrid ka caawiyo in ay markii saddexaad oo xidhiidh ah ku guulaysato Champions League waana rajada kaliya ee uu haysto waxaana soo raacda in xulka qarankiisa uu meel fiican ka gaadhsiiyo koobka aduunka.
Lionel Messi si uu ugu guulaysto xidiga aduunka ugu fiican waxa uu ku qasban yahay in uu Barcelona ku hogaamiyo ku guulaysiga koobka Champions League isla markaana uu kooxdiisa Barcelona kula guulaysto koobka La Liga taas oo ah wax uu Ronaldo dheeranayo waxa kale oo uu u baahan yahay in uu xulka qarankiisa ceebtu soo gaadhay uu meel fiican ka gaadhsiiyo koobka aduunka.
Haddii ay dhacdo in ayna Real Madrid ku guulaysan koobka Champions League waxaa si wayn hoos ugu dhici doonta fursadii uu Ronaldo markii lixaad ugu guulaysan lahaa Ballons d’Or halka taasi ay fursad wayn siinayso ninka ay xifiltamaan ee Messi oo haddii ayna kooxdiisa Barca ku guulaysan Champions League uu haysto fursada koobabka La Liga iyo Copa Del Rey.
Laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa noqon doona wax qabadka Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ee muddada kooban ee xili ciyaareedkan ka hadhsan, sida ay kooxahoodu xili ciyaareedka ku kala dhamaystaan iyo wax qabadkooda shaqsiga ah iyada oo hadda Lionel Messi uu gool dhalinta iyo gool caawinta La Liga hogaaminayo.
Ugu danbayn, waxaa qiimaynta ugu danbaysa la ogaan doonaa marka bisha June uu xili ciyaareedkani soo dhamaado isla markaana la arko waxa Messi iyo Ronaldo ay ka samayn karaan koobka aduunka ee Russia ka furmi doona isla bisha June ee sanadkan.
Ronaldo chanpionka ayuu kuguulaysanayaa iyo kabta dahabkaaa isagaa hogaamin doona inshaalaah
Cr7 & Messi Waa Laba Player oo Xirfadooda iyo Wax qabad kooda leh Way Adag tahay In Laga Hor Dhaco Ama La Saadaliyo Balse Waxan Arkayna Ninka uu Nasiibku uhiiliyo
Insha allah Cr7 Ayan Urajeynayaa
Mohamed ali Dualeh says:
Waa cadahay sanadka ninka fiican waa misi wax isu dhowna maaha waxaad isu barbar dhigtaa aba ma jirto miisi baa qaadaya